China Oyi kpọnwụrụ si sie Ezi na ụlọ ọrụ nrụpụta | Huikang
Nkwalite ngwaahịa Akụrụngwa sitere na ebe a na-egbu anụ na ụlọ ọrụ ndebanye aha mbupụ na China. Ihe akụrụngwa dị na France, Spain, Netherlands, wdg.
nkọwapụta Nkọwapụta ndị ọzọ, nabata omenala
atụmatụ The ruru nke abụba na mkpa bụ 3: 7, abụba ma kegriiz.
Tinye ọwa Adabara nhazi nri, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ọnọdụ nchekwa Ntughari n'okpuru -18 ℃
Nkà na ụzụ protein na-ekpo ọkụ Bio
Nkà na ụzụ protein oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, BFPT bụ ịgbakwunye protein nke oyi kpọnwụrụ akpọnwụ na ihe oriri. Ọrụ nke protein a na-akpọ extracellular oyi kpọnwụrụ dị elu karịa nke mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ dum akpụrụ akpụ, yana enwere ike ịnweta usoro ihe ọkụkụ nke kristal ice, nke na-eme ka ụdị nri oyi kpọnwụrụ nke ọma ma melite arụmọrụ oyi.
Ozugbo ifriizi usoro
Ozugbo kefriza usoro. Sistemụ mmiri nke CAS bụ nchikota nke magnetik na-arụ ọrụ na magnetik na-agbanwe agbanwe, nke na-ewepụta obere ike site na mgbidi iji mee ka mmiri mmiri dị na nri dị obere na edo, wee mezie nri ozugbo site na steeti supercooled na -23 Celsius oyi kpọnwụrụ n'okpuru C. Ebe ọ bụ na agbatịlata kristal kpụkọrọ akpụkọ, a naghị ebibi mkpụrụ ndụ sel nke nri, na agba, isi, uto na ịdị ọcha nke nri nwere ike weghachite mgbe agbazere, ọ nweghịkwa ihe ọ juiceụ juiceụ, na uto na njigide mmiri ka mma. jigide
Nri oriri na-eri nri
Nri ure nri na kefriza Ihe oriri nri na ichekwa oyi na-abụ nke obi jụrụ oyi, ịkọcha mmiri na nchekwa gas. O nwere njirimara nke obere okpomọkụ na obere oxygen, na-egbochi uto na iku ume nke microorganisms, ma belata mmetụta (mmebi) nke oxygen na carbon dioxide na nri. Yabụ, nchekwa nchekwa oyi na-ebelata ọ bụghị naanị nwere uru nke ngwa ngwa oyi, oge nchekwa oge na mma nchekwa dị mma, kamakwa ogologo ndụ ndụ nri.
Nke gara aga: Oyi kpọnwụrụ Siri anụ anụ ahụ
Osote: Friji sie anụ ezi anụ